RaceandHistory.com : SADC rules no electoral impasse in Zimbabwe
SADC rules no electoral impasse in Zimbabwe
The Zimbabwean government delegation to the SADC summit held at the weekend has hailed SADC’s ruling that there is neither a stalemate nor an impasse in the electoral process in Zimbabwe.
Addressing journalists in Harare this afternoon, Cde Emmerson Mnangagwa said the Zimbabwean delegation briefed the summit on the recent harmonized elections and emphasized that the situation was calm and peaceful. In his reasons for calling the summit on Zimbabwe, Zambian leader and current SADC chairman, Mr. Levy Mwanawasa cited an alleged stalemate and impasse in the Zimbabwean harmonized elections.
The Zimbabwean team to the summit explained the various legal processes that are currently underway which had caused the delay in the announcement of the results of the presidential election and refuted suggestions that the government of Zimbabwe was in anyway responsible for the delay in the announcement of the results. Cde Mnangagwa also explained how the Zimbabwean delegation was ached by the fact that Zimbabwe which was the topic of the summit was only told of the planned summit on Thursday, well after western media houses that include CNN of the United States, BBC and Sky News, were told at a news conference of the impending summit.
They said other member states were also taken by surprise by since there were no prior consultations undertaken by the SADC chairperson Mr. Mwanawasa as is the tradition. The Zimbabwean government at the summit objected in the strongest terms to the inclusion of the addresses by Morgan Tsvangirayi and Simba Makoni saying the two individuals are neither heads of state and government nor representatives of heads of state and governments. The representatives of the government of Zimbabwe felt that the inclusion of this item on the summit agenda was tantamount to elevating the opposition politicians to the status of heads of state.
The summit through the SADC observer team’s report which was read by chairman of the organ President Eduardo dos Santos was full of praises for Zimbabwe’s harmonized elections and that they were held in a free and fair atmosphere and that the counting was meticulous.
In a related development an eyewitness at the summit Darlington Muzeza said he was surprised to see a strong presence of white former Zimbabwean farmers who clapped and cheered when MDC leader Tsvangirayi arrived at a news conference he addressed on the sidelines of the summit.